920 000 oo qof ayaa ka codeeyey doorashadii goleyaasha kaniisadda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirka munaarad kaniisad. sawir: Tomas Oneborg/SvD/TT
920 000 oo qof ayaa ka codeeyey doorashadii goleyaasha kaniisadda
Tiradii ugu badnayd muddo 57 sannadood ah oo codeeysey
La cusbooneeyay måndag 18 september 2017 kl 14.51
La daabacay måndag 18 september 2017 kl 09.01
Bulshadii ugu tirada badnayd wixii ka dambeeyey sannadihii kontameeyadii ayaa ka qeyb galey doorashadii goleyaasha kaniisadda Sweden ee axaddii shalayto ka dhacday dalka.
–Waa mid aad loogu farxo iney tirada codeeysey ey kor u dhaaftey 18%, sannadihii kontameeyadii ayaa ugu dambeeysay oo heerkaa la gaaro, sida ay sheegtay Anki Bondesson.
–Waa dhab, hase yeeshee dad badan ayaa codeeyey. Waxey tiradaasi kor u dhaafi doontaa hal malyan, waa mid aannu ku farax-sannahey, sida ay sheegtay Anki Bondesson.
Natiijada kama dambeeysta ee codeeyntaasi ayay kaniisadda Sweden soo ban-dhigi doontaa ugu horreeyn kala guurka bisha sebteembar-oktoobar, kolkaasina oo xitaa la tiriyey codadkii horey loo codeeyey.
Illa hadda waxaa ku sita xisbiga Socialdemokraterna oo ku guuleeystay codad gaarsii-san 30% golaha ugu sarreeya ee kaniisadda - kyrkomötet, isaga oo heley codad wax yar dhaafsii-san doorashadii middan ka horreeysay.
Jesper Eneroth, guddoomiyaha xubnaha Socialdemokraterna ee golaha kyrkomötet.
–Waa mid lagu farxo in aannu helney codad eynaan weligeen horey u helin, wixii ka dambeeyey kolkii hannaanka doorashada kaniisadda Sweden laga dhigey shakhsi iyo cod, Sida uu sheegay Jesper Eneroth.
Doorasho shakhsi ah ee kaniisadda Sweden ayaa markii ugu horreeysay la hir-geliyey sannadkii 2001. Iyadoona uu sannadka noqday xisbiga Sverigedemokraterna, xisbiga ugu tira kaca badnaa ee dadyoowgii u codeeyey qiyaastii 3%, xisbiguna haleelay qiyaastii 9%. Julia Kronlid, af-hayeenka xisbiga Sverigedemokraterna ee siyaasadda kaniisadda.
–Waxaannu rajeeyneyney in aannu kor u kacno laba jibbaar. Iyada oo inta aannu iminka helney ay ku dhowdahay rajadayadii. Sidoo kale waxaannu rajeeneynaa in natiijada ugu dambeeysa kolka la soo ban-dhigo oo codadka dhammaan la tiriyo in aannu xoogay kor u kacno., sida ay sheegtay Julia Kronlid.
Xisbiga Center-ka iyo kuwa aan siyaasadda ku xirneyn ee kaniisadda Sweden, posk, ayaa kor u kacay qiyaas gaarsii-san 2% golaha sare ee kaniisadda - kyrkomötet. Kooxda inta badan hoos u dhacday ayaa ah midda la magac-baxday hanti-goosiga wax bedeli kara - Borgerligt alternativ, oo iminka haysta codad gaarsii-san 8,1%, waa tiro 4% ka hooseeysa kolka loo barbar-dhigo doorashadii ka horreeysay.
Doorashada goleyaasha kaniisadda oo axadda ka dhici doonta dalka
Xubinnimada kaniisadda oo lagu daatey doorashada aawadeed